Ilifu leHyper Scape likaHack yilelo elaligqityiwe 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
ilifu IHypape Scape Hack
I-Cloud Hyper Scape sisixhobo esitsha kraca esibonelela ngeyona nto imangalisayo!
Unokukhetha ukutshintsha indlela odlala ngayo i-Hyperscape-Thenga i-1-Day Product Key namhlanje!
Fumana ukufikelela okoko ungathanda apha kwi-WinThatWar-Thenga isitshixo seMveliso yeVeki e-1 namhlanje!
Akunyanzelekanga ukuba uhlawulele imali encinci apha eWinThatWar-Thenga isitshixo seMveliso seNyanga e-1 namhlanje!
Ngaba ujonge i-Hyper Scape Aimbot ethembekileyo? IHyper Scape Cloud Hack yethu iya kukubonelela nge-Aimbot ephezulu, kunye nezinye izinto eziza kwenza ukuba umsebenzi ube lula. Zabalaza kwakhona, njengoko isixhobo silapha ukunceda.
Ulwazi lweHyperscape Cloud yoLwazi
IHyperscape ngumdlalo omtsha kraca oza kukwazisa kwihlabathi elitsha kraca lomlo. Uninzi lunokucebisa, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukujonga iHyperscape Cloud Hack ngaphambi kokutsiba okokuqala-ayisiyiyo kuphela indlela yoomatshini bokufunda, kodwa baninzi abadlali abanezakhono abanokukhathazeka. Ilungele nabani na osebenzisa Windows 10 okanye bhetele, le Hyperscape Hack yi-HWID itshixiwe, kodwa ungathenga isofofer yeHWID kuthi apha eWinThatWar. Ukukopela kulula ukufaka nokusebenzisa, kodwa upakisha ipunch.
I-Hyperscape Aimbot ekhoyo ngaphakathi kwesi sixhobo ibonelela ngeAdjustable Distance yeAimbot, kunye neFOV Circle kunye neMowudi yokuThula. IHyperscape Wallhack ibandakanyiwe kwizibonelelo zeSitha se-ESP (iSkeleton), iLoot ESP, kunye neNkcukacha zoTshaba (ezinje ngomgama). Umsebenzi wokuSusa ukho kwesi sixhobo kwiJump engapheliyo.
Into ESP (umgama)
I-Aimbot FOV enokwenziwa ngokwezifiso
Indlela yeenjongo Smooth nokwenza okanye ubundlobongela be-RAM
Malunga nelifu leHyperscape
I-Hyperscape Cloud ilula ukuyisebenzisa, ngenxa yoko akufuneki ukuba ube nexhala lokuba namava anzima - wonke umntu unokusebenzisa iiHackerscape Hacks zethu, yinto nje yokufuna! Unokukhetha ukwenza le Hyperscape Hack ngelixa usasaza, njengoko ingumboniso wobungqina kwaye ayizuku “ukuphuma” ukuba ukhetha ukuya ngqo. Ukuqhekeza kungaphandle kwaye kufuneka kuphehlelelwe ngaphambi kokuba uvule umdlalo, kwaye kufuneka uqinisekise ukuba ukhuseleko lukhubazekile ukuze iHyperscape Hack isebenze ngokufanelekileyo. Nangona ungafumani isiphatho se-HWID ngobuqhophololo, siyazinika njengenkonzo eyongezelelweyo!
Kutheni usebenzisa i-Hyperscape Cloud ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli bazokuyekisa, kuba ngekhe bazinikele kumgangatho oza kuwufumana apha. I-WinThatWar ibisoloko ibeka umgangatho phambili kwiinjongo zethu kuba yeyona nto inceda abantu kakhulu ngelixa kusiko. Zininzi kakhulu iindlela zokungabinakho ukukhetha ukuba ukhetha ntoni, kwaye inyani yokuba iiHyperscape Hacks zethu azifunyanwa yicherry ephezulu kuphela. Xa ufuna iziphumo (kunye nokukhawuleza!), IHyperscape Cloud Hack yethu izakusebenzela. Ukuba uzama ukuba nefuthe elikhulu kwimidlalo yakho iyonke, sebenzisa iHyperscape Cloud Hack yethu.
Amava akho angaphakathi komdlalo azakuphuculwa xa ukhetha ukuqhekeza iWinThatWar, njengoko imenyu yethu yomdlalo ifumaneka kwindawo enye. Awunakufumana le menyu-yomdlalo naphina, kwaye yeyona ikuvumela ukuba wenze utshintsho olukhulu kuseto lwakho lokudlala ngelixa udlala. Akukho sidingo sokuvala isicelo ngokupheleleyo, njengoko unokwenza uhlengahlengiso kwimenyu yomdlalo osetyenzisiweyo. Guqula ngayo nayiphi na into oyithandayo! Ukusuka ngokukhawuleza ukuba iHyperscape Aimbot itshixe kwiithagethi, kweziphi iindlela ze-ESP eziboniswayo, unokukhetha ukulungelelanisa umdlalo wakho wokudlala nokuba ufuna ntoni na.
A5. Hayi, obu buqhetseba abubandakanyi i-hwid spoofer. Sinikezela nge-hwid spoofer eyahluliweyo kwiHyper Scape.
Unokoyisa amaqela onke uwedwa ngezixhobo zethu zisebenza, konke okufuneka ukwenze kukuthenga isitshixo semveliso kwaye ufumane ukufikelela kwangoko. I-Hyper Scape Cloud Cheat ifunwa emva kwesizathu!
Ukukopa akunzima xa usenza ngeGamePron!
Ilindelwe Lawula kunye neHyper Scape Cloud Hack yethu?